“नक्षत्रसँग एकपल” कार्यक्रमा पूर्व प्रधानसेनापती रुक्माङ्गद – Samacharpati
काठमाडौँ, १७ असार । डिफेन्स करिअर एकेडेमी नेपाल (dCAN)ले “नक्षेत्रसँग एक पल” कार्यक्रमको सुभारम्भ गरेको छ। असार १४ गते शनिवार विद्यार्थीहरुमाझ प्रेरक व्यक्तित्वहरुको अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यो अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना गरिएको (dCAN)का प्रिन्सिपल डा. राजेन्द्र केसीले बताउनुभएको थियो ।
समाज र राष्ट्रलाई उच्च योगदान दिइसकेका र दिँदै गरेका व्यक्तिहरु सँग विद्यार्थीहरुको सर्वाङ्गिण विकास गर्ने हेतूका साथ “नक्षत्रसँग एक पल’ नामक यो कार्यक्रमको थालनी गरिएको डिक्यानका प्रिन्सिपल तथा कार्यक्रमका संयोजक डा. राजेन्द्र केसीले बताउनुभयो । हरेक हप्ता शनिवार नयाँ–नयाँ व्यक्तित्वहरुसँग परिचय गराउने उद्देश्यका साथ आउँदो दिनमा साताव्यापी रुपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने समेत केसीले बताउनुभएको छ ।